Home » Akụkọ ụgbọ elu » Airbus na TNO iji zụlite ọdụ nkwukọrịta laser
Ihe oru ngo a bu akụkụ nke ihe omuma nke European Space Agency (ESA) ScyLight (Teknụzụ nkwukọrịta na Laser)
Teknụzụ nkwukọrịta laser bụ mgbanwe na-esote na nkwukọrịta satellite
Ihe oru ngo a bu ihe nkpuchi, ihe owuwu na ule nke ihe ngosi nka
UltraAir ọnụ ga-enwe ike ijikọ njikọ laser n'etiti ụgbọ elu na satịlaịtị na nzụgharị geostationary orbit 36,000 kilomita n'elu Earthwa
Airbus na Organizationtù Netherlands maka Nkà Mmụta Sayensị Na-etinye Aka (TNO) amalitela mmemme iji mepụta ihe ngosi nkwukọrịta laser maka ụgbọ elu, nke a maara dị ka UltraAir.
Ihe oru ngo a, nke a na-akwado ya Airbus, TNO na Netherlands Space Office (NSO), bụ akụkụ nke mmemme European Space Agency (ESA) ScyLight (Teknụzụ nkwukọrịta Secure na Laser). Ọ na-ekpuchi imewe, nrụpụta na nnwale nke ihe ngosi teknụzụ. Teknụzụ nkwukọrịta laser bụ mgbanwe na-esote na nkwukọrịta satellite (satcom), na-eweta ọnụego nnyefe a na-enwetụbeghị ụdị, nchekwa data na resili iji gboo mkpa azụmahịa na afọ iri na-abịanụ.
UltraAir ọnụ ga-enwe ike ijikọ laser n'etiti ụgbọ elu na satịlaịtị na geostationary orbit 36,000 kilomita karịa Earthwa, na teknụzụ na-enweghị atụ gụnyere sistemụ mechatronic na-arụ ọrụ nke ọma. Onye na-egosiputa teknụzụ ga-emeghe ụzọ maka ngwaahịa UltraAir n'ọdịnihu nke ọnụego nnyefe data nwere ike iru ọtụtụ gigabits-kwa-nke abụọ ka ọ na-enye mgbochi mgbochi na obere ihe puru omume nke interception. N'ụzọ dị otú a UltraAir agaghị eme ka ụgbọ elu ndị agha na UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) jikọọ n'ime igwe ojii ọgụ, kamakwa na ogologo oge ga-ekwe ka ndị njem ụgbọ elu guzobe njikọ data ọsọ ọsọ n'ihi kpakpando Airbus 'SpaceDataHighway. Site na ọnọdụ ha na geostationary orbit, Satọde Satọde SpaceDataHighway (EDRS) na-ebugharị data anakọtara site na satellites nyocha na Earth na ezigbo oge, usoro nke ga-ewe ọtụtụ awa.
Airbus na-eduzi ọrụ ahụ ma na-eweta ọkachamara pụrụ iche na laser satellite nkwukọrịta, mepụtara na mmemme SpaceDataHighway. Ọ ga-ahazi mmepe nke ọnụ na ule na ala na ikuku. Dịka onye isi ọrụ ahụ, TNO na-enye ahụmịhe ya na oke opto-mechatronics, nke ụlọ ọrụ Dutch na teknụzụ na mbara igwe na-akwado. Airbus Defense na Space na Netherlands ga-ahụ maka mmepụta ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ọnụ. Onye enyemaka nke Airbus 'Tesat na-eweta nkà na ụzụ ya na sistemụ nkwukọrịta laser ma ọ ga-etinye aka na nyocha niile.
Nnwale ndị mbụ ga-ewere ọnọdụ na njedebe nke 2021 na ọnọdụ ụlọ nyocha na Tesat. Na nke abụọ, ule ala ga-amalite n'isi mmalite 2022 na Tenerife (Spain), ebe njikọta ga-eguzobe n'etiti ihe ngosi UltraAir na ọnụ ọnụ laser malitere na satịlaịtị Alphasat site na iji ESA Optical Ground Station. Maka nkwenye ikpeazụ, a ga-etinye ihe ngosi UltraAir na ụgbọ elu maka ule ụgbọ elu site na etiti 2022.
Dika oru oru satellite na-eto, onodu ogugu ndi redio na-enweta nsogbu. Njikọ njikọ Laser nwekwara abamuru nke izere nnyonye anya na nchọpụta, dịka iji tụnyere oge redio jupụtara na redio, nkwukọrịta laser dị oke nhịahụ igbochi n'ihi nnukwu oghere. Ya mere, ọdụ laser nwere ike ịmị ọkụ, rie obere ike ma nyekwa nchekwa dị mma karịa redio.
Ihe omume ohuru a bu ihe di mkpa na uzo nke Airbus zuru ezu iji mee ka nkwukọrịta laser gaa n'ihu, nke ga-ewetara uru nke teknụzụ a dị ka ihe dị iche dị iche iche maka inye mmekorita Multi-Domain maka Gọọmentị na ndị ahịa nchebe.
Air Astana weputara nzute & Ekele